Shirqoollada Xasilooni-darrada Gobolka Geeska Africa ee Qatar iyo Gabbood-fallada uu geysanayo Adeegahooda Fahad Yaasin | Salaan Media
Shirqoollada Xasilooni-darrada Gobolka Geeska Africa ee Qatar iyo Gabbood-fallada uu geysanayo Adeegahooda Fahad Yaasin
December 26, 2019 | Published by: Hamse
Fahad Yaasiin oo hore uga hawlgali jiray wakaalada wararka ee laga leeyahay boqorrtooyada Qatar ee Al-Jazeera, ayaa ay calaamadsadeen sirdoonka dawladaaasi sanadkii 2009 kii iyaga oo u arkayay adeege firfircoon oo ay ku dhex beeran karaan dawlada Soomaliya maadaama aanu kasoo jeedin beelaha waaweyn ee isku hirdiyaya siyaasada dalkaasi. Fahad ayaa waxa gacanta ku qabtay ama noqday hagahiisa nin lagu magacaabo Abu Haithum Al Caskari (Magaca ninkan ayaa ah kiisa shaqo … ma aha magaciisa dhabta ah, warar aan la xaqiijin ayaa sheegayaa in macalinkan Fahad lagu khaarajiyey Gudaha magaalada Muqdisho, qarax lagula eegtah kolonyo wafti ah agagaagaarka Tarabuunka), ilo wareed lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ninkani uu xili u wada ahaa sarkaalka ay hoos tagaan Fahad iyo Qunsulka hada ka hawlgala Safaarada Qatar ee Muqdisho, taas oo ah sababta ay labadan nin u adeegsadaan ereyga saaxiib.
Dawlada Qatar ayaa hore ula macaamili jirtay xarakada Al-Shabaab oo dad badan aaminsan yihiin in Fahad Yasin laftiisu ka tirsanaa isaga oo lacago cadaan ah u kala gudbin jiray dawlada Qatar iyo Al-Shabaab gudaha Soomaliya iyo Dalka Kenya labadaba. Fahad Yasin oo isaga iyo dawlada Qatar ay isku dayeen in ay dalka Ethiopia u gaadhsiiyaan dhinbiisha dabka ah ee dambaska huwan ee loogu soo gabanayo warbaahin ayaa barnaamij uu ka sameeyey Ethiopia ayaa noqday sababta baadhis ay sirdoonka itoobiya ku ogaadeen dhagaraha dawlada Qatar, taasi oo ay dalkooda kaga hakiyren shaqsiyaad ddhowr ah, sidoo kale waxay bilaabeen la socoshada Fahad Yasiin dhaqdhaqaaqiisa taas oo aanay ka hadhin ilaa maanta oo uu yahay Agaasimaha haayada sirdoonka ee Soomalia (NISA). Warar aan la xiqiijin laakiin aan ka helay tiraba saddex il-wareed ayaa tibaaxay in tiraba laba jeer ay Sirdoonka Itiyoobiya diyaariyeen ka takhalusida Fahad marar uu ku kala suganaa Hargaysa iyo Jabuuti, laakiin madaxda sare ee haayada sirdoonka itoobiya ay ku kala aragti duwanaadeen wiilkaa dilkiisu in uu saameyn ku yeelan karo xidhiidhkooda Somaliland iyo Jabuuti, sidaasina ay ku gudoomeen in gacantaas dib loo dhigo.
Doorashadii 2012 ayaa dawlada qatar ay bilowday in ay saameynteeda soomaliya dardar galiso taas oo iyadoo adeegsanaysa adeegaheeda dhagaha fudud waxa ay abuurtay koox cusub oo siyaasada Soomaaliya majaraha u qabta, kooxdan oo ay u bixisay Dhiiga Cusub ayaa noqotay furaha albaabka dawlada qatar ay kasoo gashay Soomaliya iyada oo booska ka riixaysa dawladaha Turkey, Kenya iyo Ethiopia oo dawladaha hore iyagu taageerayay. Fahad Yasin ayaa ahaa agaasinka iyo isku xidhka dawlada Qatar iyo kooxda dhiiga cusub ama damul Jadiid. Dadka ayaa ku kala aragti duwan sababta magacan loogu bixiyey iyada oo qaar ku aaminsanyihiin in looga jeedo dhiig cusub oo loo daadiyo Soomaliya, qaar kale ayaa aamimsan in ay tahay dhiig miirasho cusub iyaga oo tusaale usoo qaadanaya hantida la boobay iyo caawimooyinka la lunsaday mudadii ay ariminayeen kooxdan gacan ku rimiska ahayd.
Siyaasadii dalalka carabta ayaa waxaa soo galay dabeyl loogu yeedhay gugii carabta, dalal badan ayaa waxa ka dhacay kacdoono isbedel doon, kuwaas oo dawlado meesha ka saaray qaar kalena ka dhex abuuray colaado khasaare badan gaystay. Dawladaha reer galbeedka ayaa ku eedeeyey sirdoonka dalka Ruushku in uu dabeylahan qayb ka ahaa iyaga oo baraha bulshada u adeegsanayay inay sii huriyaan si meesha ay uga saaraan nidaamyada dawladeed ee Galbeedka u janjeedha. Adeegsigan baraha bulshada ayaa keenay in dalal badan oo carbeed oo ay hor kacayaan Sucuudiga iyo Imaaraadku in ay Qatar ku eedeeyaan in ay dhagaro badan qayb ka ahaud iyo in ay ururada argagixisada taageero aan gabasho lahayn ah siiso. Warar hoose ayaa tibaaxaya in Sirdoonka Qatar uu jabsaday xogaha sirdoono kale oo carab ah taasina ay ahayd sababta khilaafkan degdega ah ee dalal badan xidhiidhka ugu jareen dawlada Dooxa.
Adkaynta Saameynta Qatar ee Soomaaliya
Maadaama aanay suurtogal ahayn in daaha shishadiisa laga goaamiyo siyaasada Soomaliya, ayay dawlada Qatar goaansatay in adeegaheeda ay ku darto maamulka cusub ee Somaliya ay keeni doonto, waliba uu noqdo qofka ugu awooda badan, Fahad Yasin ayaa ku qancay arrintan isaga oo danaynayay in awood ahaan uu uga faaido dhaqaale iyo mansab fulineedba. Waqtigan ayaa kusoo beegmay marxalad dawlada Somaliland ay heshiis la gashay shirkada Dubai World (DP World) ee dalka imaaraadka carabta iyo kacdoon dhalinyaro gaar ahaan qoomiyada Oromada ee dalka itoobiya. Qatar waxa ay u baahatay Qof wadahadaladii Somaliland iyo Somaliya aan ku jirin cadaawadna u qaba Somaliland in uu madaxweyne ka noqdo Somaliya si ay ugu meel mari karto siyaasadooda ku dhisan xasilooni darada. Fahad Yasin ayaa loo diray soo xulista qof ku haboon hawshaas isagana la shaqeyn kara. Kulankoodii u horeeyey waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi Fahad iyo Farmaajo, waxa aanu ku qancay in uu Farmaajo yahay lambarka ay xidhan doonto daqlada Qatar.
Nin dawlada Farmaajo kasoo shaqeeyey oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ii sheegay mar uu Fahad oo Agaasimaha madaxtooyada ah uu weydiiyey sababta uu Farmaajo u taageerey ayaa u sheegay in uu yahay nin macaan oo la wadan karo, waa sida hadalka uu u dhigaye. Halka siyaasi mucaarad ah laakiin ay Farmaajo Nairoobi dhowr mar ku kulmeen xilka ka hor uu yidhi waxa aad moodaa in sida uu kuula joogo uun uu baxayo, sidii qodf hurdo ka toosay uu mar dambe ku odhanayo walaal ma sidaasaa dhacday, goorma iyo hadalo la hal maala oo mararka qaar aad is odhanayo yaraantiisii waxa ku dhacay xanuunka autism ka.
Doorashii 2016 ayaa mar kaliya waxa boorsadii lacagta Qatar ee Fahad Yasin gacanta ku hayay ay u wareegtay dhanka lambarkoodii cusbaa ee Nayroobi laga soo xushay. Waxaanay labadii milyan ee Fahad siday goaamiyeen in Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu noqdo madaxeeynaha Soomaaliya. Fahad Yasin ayaa isna noqday madaxweynaha dadban ee Somaliya, isagoo madaxtooyada u fadhiistay jaangoynta siyaada Soomaaliya sidii ay u raaci lahayd dhabahii ay u qprsheeyeen macalimiintiisa Dooxa.
Dawladii cusbeyd ayaa waxa ay noqotay xulufo ka kala socda saddex qof, xubno beeluhu u geeyeen Farmaajo, Xubno uu soo xushay Raysal wasaarahu oo u badan shaqaalihiisii iyo saaxiibadii, iyo xubno oo soo xushay Fahad oo u badan dhalinyaro uu rabo in ay xisbi wada abuurtaan mustaqbalka. Fahad oo Agaasimaha Madaxtooyada noqday ayaa laf dhuun gashay ku noqday cid kaste.
Hurinta Xiisado xasilooni-darada Gobolka Geeska Afrika
Fahad Yasin iyo dawlada uu adeegaha u yahay ee Qatar ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dad badan oo amniga iyo xasiloonida falanqeeya ay u arkaan xaalad colaadeed oo la abuurayo. Halka dadka caadiga ah badidiiisu sanadihii hore ee maamulka Farmaajo ay u arkayeen haayadiihii dawlada oo karaamadooda iyo awoodooda lasoo celinayo, hadase u muuqda in yar mooyee dadka badidiisu in Farmoojo isku dayayo in uu gaaro booskii Siyaad Barre oo ahaa dhiigyo cab adeegsada shaadhka wadaniyad iyo qiiro qosol ku jab ah.
Siyaasad ku dhisan qabiil naceyb (Lidi ku ab Qabiilka Isaaqa)
Fahad Yasiin oo u adeegaya dalka Qatar ayaa bilaabay siyaasad ka dhan ah beesha Isaaq, isaga oo u arka in cadaadis la saaro beeshaas uu horsesdi karo carqalado soo wajaha Somaliland, sidoo kale waxaa isaga uula muuqataaa dhibaato kaste oo uu geysto ama shirqool kaste oo uu maleego in loo arkayo Farmaajo iyo beesha Mareexaan ay ka socoto maadaama SNM oo Isaaq aheed ay Siyaad bare dawladiisij oo Mareexaan ahaa ay la dirirtay. Fahad waxa uu abuurtay basaasiin kasoo jeeda Somaliland oo uu isagu magacowday waxaa kooxdaas la dhahaa ilma fahad, waxaa ka mida wasiir Saalax oo ah nin Isaaq ah horena ugu ahaa sirdoonka Sudan basaas dadban, Waxa ka mid ah Wasiir Jamaal oo ah warsangali, waxaa ka mid ah Raysal Wasaare ku xigeenka iyo saaxiibkii Odowaa (Safiirka Soomaliya ee Kuweit) iyo Xildhibaan Biixi Imaan oo dhamaantood Isaaq ciidagale ah, waxaa ka mid ah Xildhibaan Mohamed Ibrahim Abdi Sacad Muuse ah, iyo xubno kale oo beelaha Daarood, Hawiye iyo Raxanweyn ah oo uu Fahad bixiyey kharashkoodii doorashada se ay ku noqdeen xubnaha aqalka shacabka. Waxaa bilaabmay shirqoolkii Fahad ee arrintan isaga oo u maraya kooxdan ilma Fahad ama caruurta Fahad, waxaana arimahaas ka mid ahaa:
a) Raysal Wasaare Ku Xigeenka Mahdi Guleed in uu shaqaaleysiiyo 150 dhalinyaro loogu yeedhay sirdoon ka hawlgalaya Gudaha Somaliland. Wararka ayaa waxay intaas ku dareen in xubnahan ay u badan yihiin beeshiisa, shaqadooduna tahay baraha bulshada oo lasoo dhigo rajo-beelka bulshada Somaliland iyo qoraalo tibaaxaya colaado ka qarxi doona Somaliland. (liistada magacyada oo qayb aan helnay waxaan idinla wadaagi doonaa qormooyinka dambe).
b) Beesha Caalamka oo laga codsaday in ay joojiso caawimada tooska ah ee ay u fidiso Somaliland. Wasiir Jamaal ayaa la dhex marsaday qorshahaa maadaama oo uu yahay nin Warsangeli ah oo reer Somaliland ah. Hada waxa socota qorshe in Haayadaha mashaariicda ay fulinayaan ay wasaarada Qorshaynta Somaliya u go’aamiso, Wasiir Jamaal oo fulinaya amarka Fahad ayaa waxay u arkaan Somaliland oo waxqabka haayadubu ka yaraadaan in dadku ku kacayaan dawlada Somaliland, waxayse arrintani keenaysaa in dadka reer Somaliland ee ka tirsan dawlada federaalka ay isku keento, dagaalka ka dhanka ahna ay halkooda wax kaga qabtaan.
c) Saameynta warbaahinta iyo baraha bulshada: Fahad Yasin waxa uu qorsheeyey shirqool lagu mijo xaabinayo laguna wiiqayo wakaalo warar oo Somaliya ah, badelkeedana uu dhiso shabakad isku xidhan oo warar oo isagu leeyahay ama saaxiib la ah. Waxaa ka mid ah shirkada Horn Connect oo warbixin hore oo African Intelligence ku sheegtay inay tiraba saddex raadiye maamulaan kana qaataan qandaraasyada Qaramada midoomay iyo midowga Afrika, Astaan TV ayaa isna ah midka lagu gowracayo warbaahinta maqal iyo muuqaalka, waxaana si majarre habaabin ah saami looga siiyey shakhsiyaad ka mid ah caruurta socod baradka ah ee Fahad muqstaqbalka rabo in uu ciyaarsiiyo siyaasada Somaliland iyo Somalia. Fahad sidoo kaale isaga oo aaminsan awooda ay fariimo lagu sargooyey siyaasafa Qatar ee geeska Afrika u marin habaabin karaan xaqiiqooyinka ayuu waxa uu abuuray kudlado facebook, twitter, iyo bloggers ah oo ku mushahar qaata warar been abuur,buunbuunin, iyo kuwo ka dhan ah Somaliland iyo Puntland. Kooxaha la abuuray ee ku mushahar qaata waxa ka mid ah kuwo barnaamijyo soo tabiya, kuwo difaaca dawlada iyo dhaliisha cida dawlada kasoo horjeeda lasoo fadhiya 24 saac.
d) Waxaa sanadkii hore bilaabmay dhaqdhaqaaq ay beelaha Dir ku doonayeen in ay ku helaan mid ka mid ah Hogaamada ciidanka oo aan loo dhiibin dawladihii kale dambeeyey. Wararka qaar ayaa sheegaya in laba xubnood oo kasoo jeeda beesha Isaaq maagacyadooda lasoo dhigay. Abdirsaaq oo loo yaqaan Gambo-yare oo Habar Yoonis ah ayaa qolo soo jeedisay in taliyaha Xooga Dalka laga dhigo. Cabdirisaaq waxa uu ahaa sarkaal ciidamadii Somaliya ah, ka dib ku biiray jabhadii SNM, ayaa gacan kaga goday qaraxii Central Hotel ka dhacay horaantii sanadkii 2015 ka. Qofka Labaad ayaa waxa uu yahay nin magaciisa dhabta ah aanay noo suuragalin in aan helno laakiin lagu naaneyso Sheekh Isaxaaq oo ah khabiir aqoon sare iyo waayo aragnimo miisan leh u leh arrimaha sirdoonka iyo dhisitaanka haayadaha sirdoonka. Wararka aan ninkan ka helnay ayaa xaqiijiyey in uu tabobaro badan soo siiyey NISA isagoo ahaa khabiir qandaraasle ah. Fahad Yasin oo baqe ka qaba in beelah DIR booskiisa raadsadaan oo ninkan magaciisa lagu soo koobay Sheekh Isaxaaq uu noqon karo qofka isaga bedeli lahaa, ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq xubahana ilma Fahad in ay keenaan qof Isaaq ah oo laga dhigo ku xigeenka Agaasimaha NISA, dhowr qof oo lala xidhiidhay ayaa ka cudurdaartay qabashada xilkaas ee xiligan. Waxaa xoogaystah cabsida Fahad uu ka qabo Sheekh Isaxaaq, waxaana la maleegay qorshe xadhig oo lagaba afduubtay madaarka Aden Cade iyada oo ilaa imika uu xidhan yahay, war sugan oo goobta uu ku jirana aan la ogayn. Arrinka xadhiga masuulkan ayaa waxa markii u horeysay lagu dareemey dhaqdhaqaaqa xildhibaanada beesha Isaaq, iyo Xildhibaan Abdifataax oo bartiisa Twitterka soo dhigay in qoyska iyo asxaabta Abdisalan Egal (waxaan filaynaa in magaca dhabta ah ee Sheekh Isaxaaq uu yahay). Sidoo kale xubno 22 mudane ayaa saxeexay mooshin ay ku dalbanayaan in loo yeedho Fahad Yasin iyada oo Marwo Suuri oo ka hadlaysay golaha ay sheegtay in kuwo iyaga ahi u xidhan yihiin… waxaan rumeysanahay in ay ula jeedo xadhiga Sheekh Isaxaaq.
e) La wareegitaanka wakiilnimada Diyaarada Qatar Airways ee Muqdisho. Diyaarada Qatar Airweys ayaa duulimaadkeeda Soomaaliya bilowday 1 Luulyo 2019, iyada oo shirkad laga leeyahay Somaliland oo magaceeda lagu sheegay Horn Travel and Cargo Agency, ay ahayd wakiilka diyaaradan ee Somaliya. Culeys ka yimid Fahad Yasin iyo Safaarada Qatar ee Soomaliya ayaa lagaga qaaday wakiilnimada shirkadan dabayaaqadii bishii hore. Fahad ayaa la sheegay in uu siinayo seedigii oo leh xafiis la yidhaa Taano Travel Agency, mulkiilaha xafiiskan ayaa sidoo kale ah walaalka Safiirka Qatar u fadhiya Soomaliya.
Arrimaha kor ku xusan ayaa marag u ah siyaasada naceybka beesha Isaaq ku dhisan ee Farmaajo iyo Fahad Yasiin oo dawlada Qatar u adeegsanayso dagaalkeeda ka dhanka ah Imaaraadka iyl xulifadiisa.
Falkinta ciidamo Soomaaliya oo huwada magaca ISIS
Warar kooban oo ilo aan lagu kalsoonayn ayaan ka helnay in Fahad qorshaynayo dagaalyahano Al-Shabaab ahaa oo Farmaajo haybtiisa ah oo aan la shaacin goorta iyo goobta ay kaga soo goosteen Al-Shabaab in si gaar ah loogu tababaray saldhiga Turkiga ee Soomaliya. Ciidamadan qaar ka mid ah ayey xogtu tibaaxday in Fahad iyo Wasiir Jamaal qorsheeyeen in la geeyo buuraleyda Gobolka Sanaag ka dibna ay isticmaali doonaan magaca ISIS si amniga Somaliland u wiiqmo. Warar kale ayaa igaguna sheegaya in Ciidamo lagu soo tababarayo Eritrea ay noqonayaan kuwaas lañuga soo dejinayo xeebaha gobolka sanaag ee falalka Argagixiso ka hurin doona Somaliland.
Faragelinta iyo carqaladeynta Doorashooyinka la filayo in Ethiopia ka dhacaan
Qatar ayaa sidoo kale rabta in ay Faragalin ku samayso doorashada Ethiopia la filayo in ay ka qabsoontl, iyada oo u maraysa Fahad Yasiin iyo Sirdoonka Somalia oo haatan ay gacanta ku hayso kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Xogo ilo kala duwan aan ka helnay ayaa sheegaya in dawlada Qatar ay rabto in ONLF ay noqoto xisbi siyaasadeed ka dibna ku guuleysta doorashada gobolka Somalida ee Itoobiya. Itoobiya oo horeyba ula socotay dhaqdhaqaaqa Qatar iyo Fahad ayaa wali isha ku haysa arrintan oo keenaysa khilaaf soo kala dhexgala labada dal iyo heshiiskii iskaashiga dalalka geeska ee saddex geesoodka ahaa oo burbura. Badhtamihii sanadkan ayaa safar aan la shaacin oo hogaamiyaha xisbiga Soomalida Itoobiya Ato. Axmed Shide oo haatan ah wasiirka maaliya ee dawlada Fadaraalka itoobiya safar uu ku tagay Muqdisho uu madaxweyne Farmaajo ugu gudbiyey dhaqdhaqaaqyada aan la mahadin doonin ee uh wado Fahad Yasin. Waxaanu u sheegay halka ay arintaas ka taagan tahay dawladiisu iyo in gobolku aanu u baahnayn xasarado xasilooni daro abuuraya.
Dilal Qorsheysan iyo Argagixiso dawladeed
Fahad iyo wiilashiisa xukuumada ku jira ayaa dhawaan golaha wasiirada hor keenay xeerka cafinta dagaal yahanada argagixisada ee isa soo dhiiba. Falanqeeye amni oo degen Muqdisho ayaa arrintan ku sifeeyey in la gaadhay xiligii Sakariye Xirsi oo hore u ahaan jiray madaxa wardoonka shabaabbka ee loo yaqaan Amniyaat ka, in uu rabo in ciidankiisii ay ka faaidaystaan fursad si hoose loo yidhaa way isa soo dhiibeen ka dib ay ka mid noqdaan gacmaha khaarajinta ee NISA. Warar lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxay in saraakiil NISA ahi ay kulano la qaateen madaxda gobolada iyo degmooyinka dalka iyaga oo u sheegay inay jiraan xubno Amniyaat ah oo marka horeba NISA ugu jiray, kuwaas oo dib usoo laaban doona shaqadii NISA halkii ka wadi doona iyaga oo iska dhigaya in ay isa soo dhiibeen. Waxay madaxdan degmooyknka ku wargaliyeen in aanay ka hor dhicin ee hadii ay arkaan xubin Shabaabka ahayd oo soo noqotay, ay iyaga waydiiyaan inta aan la xirin.
Dhacdadii dhawaan lagu weeraray Hotel SYL, oo lagu sheegay in weerarka ay fuliyeen ciidan booliska ka tirsan ayaan ku ogaanay in Fahad iyo Taliyaha booliska aanay xidhiidh wanaagsan lahayn. Shirqoolkan oo Fahad Yasin iyo Sakariye maleegeen ayaa ahaa qorshe lagu hawlgaliyay Amniyaatkii lagu darsaday booliska. Ujeedada weerarkan ayaa ahayd sidii ilaalada looga reebi lahaa masuuliyaanta wasiirada iyo golaha shacabka xiliga ah imaanayaan kalfadhiyada ama madaxtooyo. Talaabadan ayaa u sahli doonta dhagarta loo maleegayo mudanayaal iyo marwooyin xilal haya oo kooxdani u aragto la iska hor dhaqaajiyo dhibtooda.
Fahad Yasin oo kaliya ka dhisan dhanka ka hortaga sirdoonada kale (counterintelligence) ayaa mudadii uu NISA joogay xididada u siibay dadkii sirdoonada dalalka kale ku dhex beerteen NISA. Waxa uu adkeeyey galitaanka xafiisyada haayada. Waxa uu shaki ku kala abuuray ciidanka si qof kastaa u aamino in lala socodo …. Fartii Amniyaat ayaa iyaduna taas ku dhisnayd. Waxa uu sameeyey shaqaaale badan oo ka hawlgala UN, AU, INGOs si dhaadhaqaaqa ajaanibka uu ula socda.
Madaxweyna Soomaaliya ayaa u muuqda mid garowsaday dhagaraha Fahad Yasin iyo khilaafaadka beelaha ee uu abuuray isaga oo u adeegaya Qatar. Waxa isa soo taraya warar sheegaya in Fahad Yasin xilka laga qaadi doono. Dhanka kale waxay xogo kale tibaaxeen in dawlada Qatar bilowday in doorashada sanadka dambe ay u sharaxdo Fahad Yasin oo ay u aragto in aan laga fili karin inuu isa soo sharaxo, filid la’aantuna inta badan keento Guul laala yaabo sida xasan sheekh maxamuud iyo Farmaajo ay ugu cumaamadeen kursiga u sareeya Soomaaliya.